अस्ताए धनकुटा दलित आन्दोलनका अगुवा तथा नेकपाका नेता डिल्लीस्वर दर्नाल | Mission Nepal Khabar
धनकुटा : दलित आन्दोलनका अगुवा तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) धनकुटाका नेता डिल्लीश्वर दर्नालको ६३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
नेकपा प्रदेश सल्लाहकार समिति सदस्य समेत रहेका दर्नाल दुई साताअघि प्रेसरका कारण उपचाररत थिए । एक महिनाअघि धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित घरमै रहेका बेला उनी प्रेसरका कारण ढलेका थिए ।
त्यो बेला उनलाई ‘प्रेसरले हानेर ढलेपछि’ उनलाई धरानस्थित बीपी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गरेर घर ल्याईएको थियो ।
उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि बिराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । भेन्टिलेटरमा राखिएका दर्नालको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएर चिकित्सकले उपचार नसम्भव नभएको बताएपछि शनिबार मात्रै धनकुटा ल्याइएको थियो । अक्सिजन दिएर घरमै राखिएको अवस्थामा निधन भएको उनका छोरा युवराजले बताए ।
उनी लामो समयदेखि दलित आन्दोलनमा सक्रिय थिए । उनी तत्कालीन नेकपा एमाले निकट दलित संगठन मुक्ति समाजको केन्द्रिय सदस्य थिए भने कोशी अञ्चनको सहसंयोजक थिए । तत्कालिन जिल्ला बिकास समिति दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिको दुई कार्यकाल उपाध्यक्षसमेत भएका नेता दर्नाल दलित समुदायका अगुवा नेता हुन् ।
उनी लामो समययता कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी शाही कालका विरुद्ध संगठित दलित आन्दोलनमार्फत शाही कालको विरोधमा लाग्न सजिलो होस् भनेर गठन गरिएका दलित एकता समाजको संयोजसमेत भएका थिए । दलित एकता समाज धनकुटामा क्रियाशील राजनीतिक दलित संघ संगठनहरुको साझा मञ्च हो ।
उनको निधनले दलित आन्दोलनमा क्षति पुगेका धनकुटामा दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले स्व. दर्नालप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै धनकुटामा दलित आन्दोलनको एउटा खम्बा ढलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।